/ Products / Fat Kurasikirwa poda / URB597
Rating: Category: Fat Kurasikirwa poda Tags: Tenga URB597, URB597, URB597 inotengeswa, URB597 vanotengesa
Kushandiswa kunobatanidza uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kwe URB597 (546141-08-6), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwekutonga.
URB597, inozivikanwawo seKDS-4103, inonyanya kushandiswa uye inhibitor ye-fatty-acid amide hydrolase (FAAH), iyo enzyme inokonzera intracellular hydrolysis ye endocannabinoid anandamide, ine maitiro e50% inhibition concentration IC50 ye4.6 nM uye 0.5 nM mumakirum membranes uye chiropa chemrosomes yemunhu maererano. URB597 inoratidza anxiolytic, antidipressant, antinociceptive uye analgesic effects mu vivo pasina kubudisa zvimwe zviratidzo zvinosanganiswa nemakemikari anonzi cannabinoid.
I.URB597 Basic Characters:
Synonyms: N-Cyclohexylcarbamic acid 3 '- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester; 3'-CarbaMoyl- [1,1'-biphenyl] -3-yl cyclohexylcarbaMate; 3- (3-carbaMoylphenyl) phenyl N-cyclohexylcarbaMate ; CarbaMic acid, N-cyclohexyl-, 3 '- (aMinocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester; KDS 4103 N-Cyclohexylcarbamic acid 3' - (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester ; N-Cyclohexylcarbamic acid 3 '- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester URB 597 KDS 4103; URB 597,> = 98%; APD597 (URB597)
Alpha: D + 5 ° (c = 0.437 mu chloroform)
Solubility DMSO: soluble2mg / mL, yakajeka (inopisa)
Color: Yakachena yakasimba
II. Kushandiswa kweRB597 mukufamba:
2.Iyo basa reRB597 chii?
Rationale: Chirwere chikuru chakakonzerwa nekushandiswa kwe cannabinoid receptor 1 (CB1) agonist yakananga ndeyokuti izvi zvinowedzera kuwedzerwa kunwa doro nekushandisa zvinodhaka zvinoshandiswa pakushandisa zvinodhaka. Semamwe nzira, nzira yeBBC1-receptor-mediated inogona kusimbiswa nekuwedzera anandamide mazinga nekushandiswa kwe hydrolase mafuta acid amide hydrolase (FAAH) inhibitors. Chinangwa: Kushandisa FAAH inhibitor URB597, takatsvaga kana kushandiswa kweshoko rinopera rinokonzerwa nekudhakwa kunowedzera doro rekushandisa doro, sezvinoitika neCX1 mutevedzeri wemagononi. Zvishandiso uye nzira: URB597 yakaedzwa kune doro kuzvitonga muWistar rats uye kunomwa doro kunwa mumasikirwo akasarudzwa Marchigian Sardinian doro-kusarudza (msP) rats. MuWistar rats, URB597 migumisiro yekudhakwa-inokonzerwa nekuzvidya mwoyo uye pamusoro pekunetseka-, yohimbine- uye kukonzerwa-kunokonzerwa nekudzorera doro kutsva kwakarongedzwawo. Kuenzanisa, mhinduro yeCX1 mutpor antagonist rimonabant pane ethanol self-administration yakaedzwa zvakare. Migumisiro: Pasi pemamiriro edu ekuedzwa, intraperitoneal (IP) kutungamirirwa kweRB597 (0.0, 0.3 uye 1.0 mg / kg) kana kuwedzera kuzvipira kunwa doro kunwa mumap rats kana kushandiswa kuenzaniswa kwehuwandu hwe1 uye kuenderera mberi kwehuwandu doro kuzvitonga muWistars dzisingateereri. Muchiedza chekudzorerazve, chikwata chacho chakanga chisina matambudziko pane cue-, footshock stress- uye yohimbine-induced relapse. Mukutaura, URB597 yakagumisa zvachose kugadzikana kwezvinokonzerwa nekufungidzira kwakaitwa panguva yekudzoka mushure mekuda kweP IP yekudhakwa doro (3.0 g / kg). Rimonabant (0.0, 0.3, 1.0 uye 3.0 mg / kg) zvakanyanya kuderedzwa ethanol self-administration. Mhedziso: Zviitiko zvinoratidza kuti kushanda kwe endocannabinoid anandamide system nechisarudzo chisingaiti che FAAH haiti kuwedzera dambudziko rekushandisa doro zvisina kunaka asi kunoderedza kushungurudzika kunobatanidza nekunwa doro. Isu tinogona kufungidzira kuti mishonga inobva mukushandiswa kwe endocannabinoid system modulators yakadai seRB597 inogona kupa zvipo zvinokosha kana ichienzaniswa nehutano nehuwandu hweC1 receptor activators.
3.Iyo inoshanda URB597?
Migumisiro yeRBB 597 yoga uye pamwe chete ne anandamide yakatsvakurudzwa mune rimwe boka remonke (n = 4) iro rakatsaura Δ9-THC (0.1 mg · kg-1 iv) kubva mumotokari, uye mune rimwe boka (n = 5) rinogamuchira chronic Δ9-THC (1 mg · kg-112 h-1 sc) iyo yakatsaura muvengi anonzi cannabinoid rimonabant (1 mg · kg-1 iv).
URB 597 yakagadzirisa maitiro ekuita anandamide asi kwete mamwe CB1 agonists. Zvisinei, URB 597 haina kunyanya kusimbisa kukanganiswa kweA9-THC kubviswa kwakaitwa anandamide. Pamwechete, idzi data dzinoratidza kuti inogamous anandamide mu brain brain haiti nyore kutevedzera mafambiro emitemo anonyatsogadziriswa anandamide.
Mune simba uye anosarudza mafuta asidi amide hydrolase (FAAH) inhibitor (IC50 maitiro ndeye 3 uye 5 nM muropa hwevanhu uye uropi hwehutori, maererano). Zviratidzo zvisingaiti basa rinopesana nemarudzi akasiyana-siyana, zviyero zve ion uye maantimuki, zvinosanganisira zvinogadzirwa nevanhu vanokonzerwa ne cannabinoid uye rat monoacylglycerol lipase. Anoratidzira antiallodynic uye antihyperalgesic basa mumutambo unorwadza kupisa. In vitro, KDS-4103 inhibits chiito che FAAH neine miviri yakawanda inokonzera (IC (50)) ye5 nM mumakumbo europi uye 3 nM mune microsomes yeropa yevanhu. Mu vivo, KDS-4103 inhibisa uropi hwehu runa FAAH basa mushure mokunge intraperitoneal (ip) inotungamirirwa neine miviri inoratidzirwa (ID (50)) ye0.15 mg / kg. Iyo kemikari haina kunyatsopindirana nezvimwe zvinokonzerwa ne-cannabinoid, zvinosanganisira cannabinoid receptors uye anandamide kutakura, kana kuti nepepa yakafara yezvinogamuchirwa, zviyero zveioni, vatakuri vematokari uye enzymes. Ne ip hutungamiri kumakonzo nemakonzo KDS-4103 inobatsira zvikuru, anxiolytic-like, anti-depressant-like uye analgesic effects, iyo inodziviswa nemishonga ne CB1 vanopikisana nevarwi. Kusiyana neizvi, pamasero anonyanya kudzivisa basa re FAAH uye anowedzera hutano hweanandamide maitiro, KDS-4103 haisati yatsvaga mararamiro anokonzerwa nehutabhaidhi (semuenzaniso, catalepsy, hypothermia, hyperphagia), haisi kukonzera nzvimbo, uye haisi kuita iyo kusarura migumisiro yezvinoshandiswa zvinoshandiswa zvehunnabis, Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC). Izvi zvitsva zvinoratidza kuti KDS-4103 inoshandisa nekusimudzira zviito zve tonic zve anandamide pane subset ye CB (1) receptors, iyo inowanzove yakabatanidzwa mukudzora manzwiro uye kurwadziwa. KDS-4103 inowanika mumuromo mumakonzo uye emnomolgus monke. Zvidzidzo zvitsva zvinogara zvisingakanganwiki (1,500 mg / kg, per os) mumarudzi maviri aya haana kuratidza systemic toxicity. Saizvozvowo, hapana uroyi hwakatarwa muBacterial cytotoxicity muedzo mu vitro uye muchiitiko cheAmes. Uyezve, hapana kukanganiswa kwaionekwa mumakonzo pamutambo we rotarod mushure mekuvhara ip ip uye kurapwa neKDS-4103 pamadhora kusvika ku5 mg / kg kana mubasa rekuona bhetri mushure mokunge mazwi ari kusvika ku1,500 mg / kg. Zvigumisiro zvinoratidza kuti KDS-4103 ichapa nzira inoverengeka nehutano hwakanaka hwehutano hwekurapa kushungurudzika, kuora mwoyo uye kurwadziwa.
IV. Ungatenga sei URB597 kubva kuAASraw?
Iva wokutanga kuongorora "URB597" kukanzura mhinduro